Dumarka Senegal ayaa Sabtidii isugu soo baxay waddooyinka Dakar si ay uga soo horjeedaan isbedelka cimilada. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Dumarka Senegal ayaa Sabtidii isugu soo baxay waddooyinka Dakar si ay uga...
Ujeedadoodu waxay ahayd inay kor u qaadaan ka qaybgalka haweenka ee doodda cimilada oo ay dadka ku dhiirrigeliyaan inay tixgeliyaan welwelkooda gaarka ah ee cimilada sida Senegal iyo haweenka Afrika ee shirka cimilada bisha soo socota kaga qayb gelaya Glasgow.
Isku-duwaha hawshan, Khady Camara ayaa iftiimin dheeraad ah ka bixisay ujeeddada ka dambeysa isu-soo-baxan. “Waa in la maqlo codka haweenka Afrika, gaar’ahaan kan haweenka Senegal, sababtoo ah maanta dunidu waxay wajahaysaa waxa loogu yeero isbeddelka cimilada oo saamayn taban ayaa laga dareemayaa meel kasta oo Senegal ka mid ah.”
Kalfadhiga 26-aad ee Shirweynaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada ee dhinacyada, ayaa ku beegan xilli la sheegay in dunidu la kulantay mid ka mid ah sannadihii ugu kululaa ee la diiwaan geliyo.
Isbeddellada la saadaaliyay ee cimilada waxay u badan tahay inay u horseedaan saamayn ba’an qaaradda oo dhan. Cunno yari ka jirta Bariga Afrika ayaa cad. Isuduwaha banaan-baxan, Nadia Dia ayaa ku dhiirri-gelisay haweenka inay ka soo qayb galaan si ay ula dagaallamaan caddaalad-darrada cimilada.
“Waan ka warqabnaa shir-madaxeedka Glasgow waxaanan doonaynaa in la maqalno sheegashooyinka haweenka u heellan la-dagaallanka caddaalad-darrada cimilada. Waa ay naga go’anahay, dhammaantayo in wax muuqada laqabtaa, waxaan leenahay hal meere. Maxayna dadka qaarkii u joojin ama u jiraan inay wasakheeyaan Qaaraddeenna? Ma doonayno wasakhdaas mar-dambe
Sannadka 2020 wuxuu gaadhay heerkulku ku dhawaad ​​1.02°C celcelis ahaan. Dhibaatooyinkaa xad-dhaafka ah, oo ay keeneen isbeddelka cimilada, ayaa si weyn looga dareemayaa Afrika oo dhan.
Previous articleMadaxa Ilaalada Nukliyeerka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in dabagalka Iiraan uusan ‘sii socon karin’
Next articleDR Congo waxay qabanqaabisay tartan loogu talagalay gobolka harooyinka waaweyn ee Afrika oo ah Karateega nabada